Ifenisha liyisici of amafulethi ingaphakathi, okuyinto ukukhonza amakhosi abo isikhathi eside. Lapho indoda iza ekhaya, ngibona ifenisha lokuqala ubonisa isithombe ukuphila yomnikazi, izithakazelo zakhe akuthandayo.
Namuhla, lapho ukhetha ifenisha yemibuzo ebaluleke kunayo yonke futhi evame ukubuzwa yilezi: kanjani ukukhetha? Indlela ukuhlela izakhi ukuze babheka sisonke?
Umsebenzi oyinhloko ifenisha Ukwakheka - ukudala isimo sasekhaya wenduduzo, ubuhle nenduduzo. Nokho, lapho uya ukuthenga ifenisha, ithola ukuthi ukwenza kanjalo akuyona ukuze kube lula kakhulu. Enye indlela yokuxazulula le nkinga ukuthenga isixhobo ifenisha. Lapho abantu abakhethiwe zivame uholwe izifiso, ukunambitheka kanye impahla amathuba. Futhi nomthelela ekukhethweni kuka Igumbi osayizi. amasethi Ifenisha e ngokuvamile kufanele uthenge kulezo zimo, uma egumbini isetshenziselwa kuphela inhloso eyodwa ethize. Ezimweni lapho igumbi lihlukaniswe ezinqumela ngamaqembu amagatsha, ezahlukene ngenhloso, ifenisha Kufanele kukhethwe izakhi ngabanye, ngamunye okuhambelana endaweni ekamelweni lakhe, kodwa into esemqoka - ukuthi zonke nihlanganyele ngokuvumelana, fitting ku isitayela jikelele egumbini. Original design Sitayela singachaza sibuye sibe inhlanganisela izinhlobo ezahlukene ifenisha.
Uma ufuna ukwenza igumbi babukhanya futhi kumnandi, ezinemibala egqamile sihlanganise ifenisha futhi ifenisha ngombala omhlophe. Nikeza egumbini ukubukeka yokuhlala kukhona zonke izinhlobo izesekeli izimbali. Uma ingaphakathi efulethini noma indlu iqukethe imininingwane efana eziko noma into ebaziwe, into nesitayela esifanako ekufanele ilandelwe kanye amasethi ifenisha. Okwamanje, ingaphakathi yokuhlala ihlaya wamukelekile kanye nomklamo ezingalindelekile, noma inhlanganisela izitayela ezahlukene. Yiqiniso, ungakhetha ifenisha eqolo, kodwa ukubekwa kwayo okungalungile kungalimaza bezibona wezangaphakathi wonkana, futhi egumbini abonakale buthuntu futhi amabi. Kunalokho, kubonakala ifenisha ezishibhile futhi Homely ahlelwe kahle futhi ayihlomele, ungakha isitayela emangalisa ezibukwayo, uyonika ikamelo i ukubukeka ekhangayo, futhi okubaluleke - ukuba ukhululekile for the Sebawoti.
Yingakho, ebuka ikhathalogu ifenisha esitolo, sinake isitayela ifenisha, lula yayo, e umcabango ngokusebenzisa kungenzeka ingaphakathi design indlu noma ifulethi. Abantu abakulesi sithombe zokuphila kwakhe bajwayele ukuthatha izivakashi ungakhetha ifenisha zikanokusho okuzokwenza wezangaphakathi design amafulethi umkhathi samaholide nsuku zonke, noma kuyoba ingxenye isenzo ezigcawugcawu. Isimo jikelele egumbini kufanele athokozise, hhayi okuphambene nalokho. Ngokuvamile abantu bebhekene nenkinga ye nokubekwa fenisha ekamelweni efulethini elincane edolobheni. Kuyenzeka kube ukusiza ifenisha esakhelwe noma ifenisha Convertible. Ngu ifenisha transformable kungenziwa ngokuphepha kuchasiselwe usofa embhedeni, kanye imibhede amatafula, okuyizinto isikhathi ubuningi ecasha ekamelweni, ngaleyo ndlela ukukhulula isikhala egumbini.
Ukuya esitolo sefenisha, qaphela ukuthi njengoba izinto akuzona kuphela izinhlobo ezahlukene ukhuni asetshenziswe ekukhiqizeni ifenisha, kodwa futhi metal and plastic, elibuye bahlobise ngaphandle uhlobo ifenisha, ngaphezu, izinto ezinjalo ziyasiza futhi kulula ukuyisebenzisa. ifenisha upholstered ngokuvamile ezenziwe ngezinto ezivumela eside ukugcina ifomu - polyurethane foam futhi isipanji iraba, futhi ngezinye izikhathi lisetshenziselwa ekukhiqizeni phansi, feather and behhashi. I Upholstery ubuswa izindwangu yemvelo kanye zokwenziwa, isikhumba kanye nezinye izindwangu.
I-Pushkin yase-Reserve "Mikhailovskoye": "Sawubona, ikhonteli elilahlekile!"
Izinhlobo gearboxes: incazelo, izithombe
Ukuhlaziya estradiol: evamile, ukulungiselela, ukufunda, emagama Imiphumela
Kungakanani utshwala igcinwe umchamo kanye egazini?